IGUMBI EHHOTELA ELINGISISE XVII - I-Airbnb
IGUMBI EHHOTELA ELINGISISE XVII
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Olivier
Itholakala endlini eyisithabathaba yangasese, enefasitela elibheke ukukhanya kwesibhakabhaka esikhulu, endaweni ethule, ngiqasha igumbi elihlukile elinomnyango walo, indlu yokugezela yangasese kanye ne-WC kodwa ngaphandle kwezindawo ezivamile. Umbhede kanye ne-wardrobe ku-mezzanine. Ihhovisi kanye nendawo yokudla kwasekuseni kuqeda le ndawo.
Igedlela, i-toaster, ifriji elincane kanye nefeni kuyatholakala.
Lesi sakhiwo sitholakala endaweni eyitshe ukusuka eCours Mirabeau, Place des Précheurs kanye nePicasso Museum yesikhathi esizayo.
Itholakala kahle kakhulu, eyakhiwe ngengxube yezinto ezindala nezamanje, ezinophahla oluphakeme kakhulu, le cocoon izokuyenga ngobuhle bayo obungapheli.
4.78 · 116 okushiwo abanye
Inombolo yepholisi: 13001001097WO